Toerana fitsangatsanganana tsy miato ho an'ny mpitsangatsangana
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Toerana fitsangatsanganana tsy miato ho an'ny mpitsangatsangana
Raha ny dia no jerena, ny sasany amintsika dia tsy tia afa-tsy ny miala sasatra amoron-dranomasina tsara tarehy; ny hafa kosa tia manadihady ny kolontsaina eo an-toerana; ary ny sasany mitady traikefa nahafinaritra fotsiny. Raha ity farany no azo ampiharina aminao dia tsy isalasalana fa eo am-pitadiavana ny toerana manaraka hikarohany anao hatrany. Kitiho ny kitaponao, raiso ny GoPro anao ary manomàna ny dianao manaraka mankany amin'ny iray amin'ireo toerana fivezivezena tsy an-kijanona dimy ho an'ny mpitsangatsangana.
Tany misy tempoly volamena, harambato vatosokay ary fety masiaka; Thailand dia manome fifangaroana mahafinaritra, fientanam-po ary fientanam-po. Manenona sy mivoaka ny fifamoivoizana amin'ny tuk tuk ao an-tanàna be olona ao Bangkok, mandalo ala mikitroka maitso any amin'ny havoana Chiang Mai avaratra na mitsangatsangana amin'ny nosy mankany amin'ny nosy amin'ny sambo fety any atsimon'ny firenena. Haingana ny fandehan'ny fiainana eto ary afaka mankafy ilay dia ianao.
Tsy mitsaha-mitombo ny lazany, ny firenena mikofoka any Kroasia dia toeram-pialofana ho an'ireo mpitsangatsangana. Manakarama fiara avy hanao kayak ary zahao ny morontsiraka Dalmatian manaitra, ireo kayak-dranomasina milahatra manodidina ireo nosy tsara tarehy maro na zahao ireo toerana fanaovana sary mihetsika rehetra ho an'ny andian-tantara malaza, Game of Thrones. Fantatrao ve fa ny tanàna manan-tantara ao Dubrovnik dia miverina ho King's Landing? Betsaka ny tranonkala azo ekena amin'ny seho marolafy manerana ny firenena.
Nouvelle-Zélande dia firenena iray manontolo momba ny traikefa misy lasantsy adrenalinina ary ho tototry ny hatsaran-tarehy voajanahary mampihetsi-po ianao, izay manome ny toerana hanaovana traikefa nahafinaritra maro be. Azonao atao ny mandeha manodidina ny nosy avaratra sy atsimo amin'ilay malaza Kiwi Experience fiara fitateram-bahoaka fitsangatsanganana hop-on hop na, ho an'ny traikefa nahafinaritra farany, manakarama campervan ary tadiavo zavatra amin'ny hafainganana manokana. Mandehana mitsambikina bungee ao Queenstown, mitsingevana mamakivaky ny lava-bato Waitomo Glowworm ary mitsangatsangana mankany an-tampon'ny glacier Franz Josef.
I Mexico dia mirehareha amin'ireo morontsiraka fotsifotsy tsy misy fotony, tantara manan-tantara ary fiainana amin'ny alina tsy misy toa azy. Miakatra any an-tampon'ny fiakarana piramida El Castillo eo amin'ny rava Chichen Itza Mayan, tsipika misy zipo ambonin'ireo tampon-kazo ao Xplor na milentika lalina amin'ny rano madio mangarahara amin'ny cenote ambanin'ny tany manamorona ny Saikinosy Yucatan. Raha vao milentika ny masoandro dia tohizo mandritra ny alina ny fety any Coco Bongo any Cancun.
Mety ho kely i Sri Lanka, saingy be dia be ny zavatra azo zahana amin'ity nosy tsara atsimon'ny India ity. Manakarama torolàlana manokana hitondrana anao isaky ny toerana mba hahazoanao tombony betsaka amin'ny traikefa nahafinaritra nataonao ary hianaranao avy amin'ny mponina. Miakatra any an-tampon'ny malaza Sigiriya Ny trano mimanda vatolampy dia tsy maintsy atao tanteraka amin'ny fahitana panoramic mahatalanjona avy any ambony. Toy ny mandeha amin'ny safari amin'ny alàlan'ny Valan-javaboary Yala ary mijery hatrany ireo elefanta, voay ary leoparda.
Ka ho aiza izany? Manantena aho fa ny iray amin'ireo toerana voalaza etsy ambony ireo dia nahasarika ny sainao ary ho làlana fitsangatsanganana manaraka amin'ny lisitry ny siny fitsangatsanganana.
Mövenpick Hotel & Resort Yanbu: fananganana ho avy maitso
Tena azo antoka ve ny Boeing 737 MAX: Fanontaniana maro taorian'ny fianjerana mahafaty nataon'ny Lion Air